Fransiiska oo Qaxooti Afganistan ah dib ugu celiyay Dalka Bulgaria
HomeWararka CaalamkaFransiiska oo Qaxooti Afganistan ah dib ugu celiyay Dalka Bulgaria
October 5, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Faransiiska ayaa afar Afgaanistaan ​​ah dib ugu celiyay Bulgaria Isniintii iyadoo la raacayo Xeerka Dublin kaas oo u oggolaanaya magangelyo -doonka in dib loogu celiyo waddanka ugu horreeya ee yurub yimaadda.
Qareennad u doodaya waxay ka baqayaan in dadkan reer Afgaanistaan ​​hadda dib loogu masaafuriyo waddankii ay ka yimaadeen, maadaama Bulgaria aysan joojin tarxiilkeedii Afghanistan inkasta oo ay Taliban la wareegeen dalkaasi.
Ururka qareennada Strasbourg ee bariga Faransiiska ayaa cambaareeyay soo celinta afarta reer Afgaanistaan ​​ee Faransiisku ku soo celiyey Bulgaria sida uu dhigayo xeerka Dublin ee oggolaanaya in magangelyo -doonka dib loogu celiyo waddankii ugu horreeyey ee yurub yimaad.
Ururku wuxuu tilmaamay in muwaaddiniinta Afgaanistaan ​​ay halis ugu jiraan in dib loogu celiyo waddankii ay ka yimaadeen. Bulgaria ma aysan joojin masaafurinta Afghanistan inkastoo kooxda Talibanka ay awoodda la wareegtay bishii Ogosto ee la soo dhaafay.